पानीको बाफ लिँदा हुन्छन् यस्ता फाइदा
चिसो मौसम सुरु हुनासाथ धेरैलाइै रुघा, खोकी, ज्वरो तथा फ्लुजस्ता रोगले सताउन थाल्छ । यस्ता बिमारीको उपचार गर्ने धेरै घरेलु विधि छन् । त्यसमध्ये परम्परागत रूपमा चलेको तातो पानीको बाफ लिनु पनि हो । तातोपानीबाट बाफ लिने एक सरल तथा चाँडै राहत प्राप्त गर्ने उपयुक्त उपचार विधि हो । तर, केहीलाई बाफ लिने सही तरिका […]
बोल्दा आवाज आएन ? यसो गर्नुहोस्
होहल्ला गर्ने तथा चिच्याउने गर्दा कहिलेकाहीँ स्वर नै सुक्न सक्छ । कुनै वेला नारा..
टुथपेस्टका छन् अरु धेरै काम, जान्नुहोस्
सबैले जानेको कुरा हो, टुथपेस्टको काम दाँत स्वस्थ राख्ने तथा टल्काउने हो । तर, कम..
लोकल बसमा यात्रा गर्नेलाई ६ टिप्स
सीताराम हाछेथु ट्राफिक प्रहरी प्रमुख, ललितपुर लोकल बसमा यात्रा गर्नेलाई हरेक दिन..
यस्ता छन् देशमा कर्मचारी : खोप स्टोरको साँचो वोकेर हिडेपछि दर्जनौ वच्चाले खोप पाएन्न
जाजरकोट– नियमित खोप लगाउन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पुगेको दर्जनौ वालवालिका खोप ..
डेङ्गुबाट कसरी बच्ने ?
केही वर्षयता नेपालमा डेङ्गुका बिरामीहरु दिनदिनै बढिरहेका छन् । खासगरी अव्यवस्थित बसाइ, औद्योगीकरण, जथाभावी फ्यालिएका फोहोर तथा टायर, स्वच्छ पानीको अभाव आदि कारणले डेङ्गु फैलँदै गएको छ । जनचेतनाको कमी, आवश्यक खोप, औषधीको अभावले बेलाबेलामा डेङ्गुले महामारीको रुप लिने गरेको छ । डेङ्गु के हो ? कसरी सर्छ र यसबाट कसरी बच्ने उपायका बार..
जान्नुहोस् : तपाईंले खाएको पौष्टिक तत्वले शरीरमा यस्तो काम गर्छ…
स्वास्थ्य शरीरका लागि सन्तुलित खानाको आवश्यकता पर्दछ । त्यस्तो खानामा शरीरलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न पौष्टिक तत्वको समायोजन गर्नुपर्दछ । हामीले दैनिक खाने खानामा कुन–कुन पौष्टिक तत्व पाइने चीज समावेश गरेका छौं र ती तत्वमा के–के पाइन्छ । जानौं : कार्बोहाइड्रेट : –शक्ति प्रदान गर्ने । यसबाट ७०–८० प्रतिशत शक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ । ..
पछाडि पर्स वा मोवाइल राख्नु यसकारण हानिकारक
बस्दा हाम्रो शरीरको पुठ्ठा सतहमा रहन्छ । कहिलेकाहीँ बस्ने ठाउँ असहज या धेरै साह्रो हुँदा पुठ्ठामा पीडा महसुस हुन्छ । लामो समयसम्म एकै सिटमा बसिरहँदा पनि पुठ्ठामा दुखाइ हुन्छ । पछाडि खल्तीमा बाक्लो पर्स या कडा वस्तु राखेर बस्दा पीडाको महसुस झन् धेरै हुन्छ । लामो समयको बसाइपछि कुनै वेला गोडा झमझमाउने पनि गर्छ । […]
अण्डा उसिन्दा नगर्नुहोस् यी गल्ती, यस्तो छ सहि तरिका
अण्डालाई उमाल्दा हामी स–साना गल्ती गर्छौं जसका कारण अण्डा बिचमा नै फुट्ने गर्दछ । यदि केही सजिलो तरिका अपनाए अण्डामा रहेको पोषणलाई पूर्ण सुरक्षित राख्न सक्छौं । अण्डा उसिन्नका लागि सबैभन्दा पहिले पानी उमाल्नुहोस् र त्यसमा अण्डा हाल्नुहोस् । यसो गर्दा अण्डा फुट्दैन र पोषक तत्व रहिरहन्छ । अण्डालाई कम आँचमा १० मिनेटसम्म उसिन्दा पर्..
गर्भको बच्चा खतरामा रहेको संकेत
डा. बबिता थापा, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, लुम्बिनी मेडिकल कलेज,पाल्पा गर्भावस्थामा विभिन्न परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । कहिलेकाहीँ बान्ता हुनु, हातखुट्टा गल्नु, पेटमा असजिलो हुनुजस्ता सामान्य लक्षण देखिन्छन् । तर, यिनै सामान्य लक्षणले कहिलेकाहीँ गर्भको बच्चामाथि असामान्य नतिजा निम्त्याउन सक्छ । गर्भको बच्चा खतरामा रहेको संकेत दिने केही..
दैनिक बिहान गर्नुपर्ने सामान्य ५ कुरा, जसले तपाईंलाई स्वस्थ राख्छ
–बिहान एक्कासि जुरुक्क उठ्नु हुँदैन । उठेपछि १ मिनेट जति बस्नुस् । अनि शरीर तन्काउनुस् । जसले गर्दा रक्तसञ्चार र पाचन प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ । –दाँत छिट्टै चम्काउने उद्देश्यले धेरै नघोट्नुस् । धेरै बलले घोट्दा दाँत र गिजासम्बन्धी विभिन्न रोग लाग्न सक्छ । नरम ब्रसले २–३ मिनेट हल्का ब्रस गर्नुस् । ब्रस महिनैपिच्छे परिवर्तन गर्नुप..
मात्र एउटा आलूले के के गर्न सक्छ, थाहा पाउनुस् १० फाइदा
आलूमा प्राकृतिक ब्लिचिङ एजेन्ट हुन्छ जसले छालालको रङलाई निखार्न मद्दत गर्दछ । छालाको दाग धब्बालाई हटाउनेदेखि अनुहारको रंगमा निखार ल्याउँछ, एउटा आलुमा । ब्यूटी एक्सपर्ट निक्की बावाका अनुसार आलूमा एन्टी एजिङ गुण हुन्छ जसले चाउरीबाट बचाउन सहयोग गर्दछ । आउनुहोस्, आलुका १० प्रयोग र यसका फाइदा । एउटा आलूको रसमा अण्डाको सेतो भाग मिसाएर..
चुम्बनका यी सात कलामार्फत गर्नुहोस् पार्टनरलाई फिदा
केही नभनी आफ्नो प्रेमलाई दर्साउने सबैभन्दा राम्रो र प्रभावकारी तरिका भनेको चुम्बन हो । तर चुम्बन गर्नु पनि एक कला हो । तपाईं यसमा जति सृजनात्मक हुनुहुन्छ त्यसको असर त्यति नै धेरै तपाईंको पार्टनरलाई पर्दछ । त्यसकारण चुम्बन गर्दा भिन्न भिन्न तरिका अपनाएर पार्टनरलाई आफ्नो प्रेम दर्साउनुहोस् । अमेरिकन किसः अमेरिकन किस पनि फ्रेन्च कि..
रक्तचाप नियन्त्रण गर्न यस्तो श्वास–प्रश्वास विधि चाहिन्छ
योगी पूर्ण श्रेष्ठ, महामृत्युञ्जय योग केन्द्र, गौशाला मानव जीवनमा श्वासको महत्व सबैभन्दा बढी छ । श्वास नै मासिको जीवन, शक्ति तथा विभिन्न रोगबाट बचाउने औषधि पनि हो । अझ मानिसलाई धेरै सताउने उच्च रक्तचाप र श्वासको सम्बन्ध त घनिष्ट नै हुन्छ । अव्यवस्थित जीवनशैलीले अहिले उच्च रक्तचाप धेरै मानिसमा देखिने सामान्य रोगजस्तै हुन थालेको ..
यस्तो देखाउँछन् टिनेजरले स्वभाव, जान्नुहोस् सम्झाउने उपाय
खेमराज भट्ट, उपप्राध्यापक, त्रिवि मनोविज्ञान केन्द्रीय विभाग टिनेजर अर्थात् किशोरावस्थालाई संवेदनशील उमेर समूह मानिन्छ । यो उमेरमा सिकेका र सिकाइएका पाठकै आधारमा उनीहरूको भविष्य तय हुने मनोविज्ञहरू बताउँछन् । यो उमेर अवधिमा उनीहरू निकै अनौठा र फरक स्वभाव देखाउँछन् । घरका अन्य सदस्यसँग उनीहरूको स्वभाव धेरैजसो बेमेल नै हुन्छ । यह..
कस्तो चाहिन्छ किचन ?
निमा लामा, मोडुलर किचेन प्रालि खाना बनाउने स्थानका रूपमा परिचित किचेनको विशेषता त्यत्तिमै सीमित छैन । अन्य कोठाजस्तै किचेन पनि अहिले पूर्णरूपमा ‘हाइटेक’ बन्न थालिसकेको छ । खाना बनाउने ग्यास चुलोे, चिम्नी, सिङ्क, भाँडाकुँडा राख्ने र्‍याकलगायत सबै आधुनिक किसिमका किचेनमा अनिवार्यजस्तै हुन थालेको छ । मोडुलर किचेनको अवधारणा आएसँगै रे..
क्याल्सियम नपुगे के हुन्छ बच्चालाई ?
हाडजोर्नीको विकास र मजबुतीका लागि जुनकुनै व्यक्तिलाई उमेरअनुसार क्याल्सियम जरुरत पर्छ । तर, बढ्दो उमेरका बच्चालाई क्याल्सियमको जरुरत झन् बढी हुन्छ । केटाकेटी उमेरमा क्याल्सियम अभाव भयो भने गम्भीर समस्या निम्तिन सक्छन् । बच्चालाई क्याल्सिमय नपुगे के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा हाडजोर्नी विशेषज्ञ प्रा.डा. गणेश गुरुङ भन्छन्ः – -बढ्न..
मनोपरामर्शदाताका अनुसार दाम्पत्य जीवन सफल बनाउने यी हुन तरिका आफ्नो दाम्पत्य जीवन सफल बनाउने चाहना सबैको हुन्छ । तर, विभिन्न कारणले वैवाहिक जीवनमा आनन्दित हुन नसकेकोे धेरैको गुनासो सुन्न पाइन्छ । आखिर दाम्पत्य जीवनमा आनन्दित हुन नसक्नुमा दोष कस्को हुन्छ ? पति र पत्नीबीच कस्ता कुराले समस्या सिर्जना हुन्छ ? यस्ता विषयमा बुझ्न आवश्यक हुन्छ । दाम्पत्य जीवनलाई सफल बनाउन हरेक दम्पतीले अपनाउनुपर्..
फेस प्याक लगाउँदा बिर्सेर पनि नगुर्नहोस् यी ६ गल्ती
फेस प्याक लगाउँदा तपाईंको अनुहारमा ग्लो त आउँछ नै तपाईंको रंगमा पनि निकै निखार आउँछ । तर फेस प्याक राम्रोसँग नलगाए यसको राम्रो प्रतिफल निस्कँदैन । फेस प्याकको राम्रो प्रतिफल पाउनका लागि गर्न नहुने यी ६ गल्तीबारे हामी बताउँदै छौं । नुहाउनुभन्दा अघि होइन, पछि लगाउनुहोस् फेस प्याकः धेरैजसो हामी नुहाउनुभन्दा अघि फेस प्याकको प्रयोग [..
आफूलाई यसरी बचाउनुहोस् कुकुरको सम्भावित आक्रमणबाट
पार्कमा घुम्दा, सडकमा टहल्दा वा बाइकमा यात्रा गर्दा तपाईंको पछाडि कुकुर पछि लाग्यो भने तपाईंलाई पक्कै पनि डर लाग्छ । तर यस्तो अवस्था जो सुकैलाई जुनसुकै अवस्थामा आउन सक्छ । त्यसकारण यस्तो अवस्थामा कस्तो तरिका अपनाउनुपर्छ भन्ने बारे हामी जानकारी दिँदै छौं । यदि कुकुर तपाईंको पछाडि दौडिँदै आएका छ र भुकिरहेको छ भने डराएर […]
जाडोमा बच्चाको केयर गर्ने सही तरिका
डा. निभा राजभण्डारी, बालरोग विशेषज्ञ वयोधा अस्पताल जाडो समय बच्चाहरूका लागि सबैभन्दा संवेदनशील मौसम हो । यो मौसममा बच्चाहरूमा रुघाखोकी लाग्नेदेखि श्वासप्रश्वासको समस्या बढी देखिन्छ । विशेषगरी, पाँच महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकामा रुघाखोकी, निमोनियाजस्ता श्वासप्रश्वासजन्य रोगको समस्या हुन सक्छ । ६ महिनाभन्दा कम उमेरका बच्चा..
कसरी दिने गाडीको लाइसेन्स परीक्षा ?
शिवकुमार श्रेष्ठ, कीर्तिपुर मोटर ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर सवारीसाधन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को नयाँ दर्ता चार महिनापछि बल्ल खुलेको छ । त्यसैले यातायात व्यवस्था विभागमा नयाँ लाइसेन्स लिन चाहनेहरूको भीड नै देखिन्छ । अझ बागमती अञ्चलमा मात्र खुला भएका कारण नेपालभरका नयाँ सवारीचालक यहीँ धाइरहेका छन् । लाइसेन्स लिन इच्छुक धेरै व्यक्ति लि..
तातो पानीले नुहाउँदा यी कुरा ख्याल गरौँ
सबी श्रेष्ठ, ब्युटिसियन चिसो मौसममा चिसो पानीले नुहाउनु धेरैलाई तनावको विषय पनि हुन्छ । जाडो सुरु हुनासाथ तातो पानीले नुहाउनुपर्ने धेरैको बानी नै हुन्छ । तातो पानीले नुहाउँदा धेरैलाई रमाइलो अनुभव त हुन्छ, तर यसले शरीर र स्वास्थ्यलाई असर पनि पुर्‍याउन सक्छ । त्यसो त तातो पानीले नुहाउँदा शरीरको दुखाइ कम गर्न पनि सहयोग हुन्छ । [&he..
विद्युत् खपत कम गर्न यसो गरौँ
सुशील श्रेष्ठ, सब–ओभरसियर, इलेक्ट्रिक लोडसेडिङ हुन नदिन तथा कम गराउन विद्युत् प्राधिकरणले पहल गरिरहेको छ । यस्तोमा हामी जनताले पनि सकेसम्म कम विद्युत् खपत गरेर राष्ट्रिय अभियानमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छौँ । विद्युत्को कम खपतले बढ्दो महँगीको मार खेप्नु परिरहेको अवस्थामा केही राहत दिन सक्छ । बिजुलीको खपत सकेसम्म कम गर्न यस्तो तरिका अ..
डाक्टरका कुरा :हार्ई ब्लडप्रेसर केही भ्रम र यथार्थ
डा. मिलनप्रकाश श्रेष्ठ, मुटुरोग विशेषज्ञ, ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल बढ्दो आधुनिकीकरणसँगै संसारमा नयाँ–नयाँ समस्या पनि उत्पत्ति हुँदै गएका छन् । कुनै समयमा आक्कलझुक्कल देखिने ब्लडप्रेसर अहिले प्रमुख समस्या नै बन्न थालेको छ । कतिपय २० देखि ३० वर्षका युवाहरूमा यही समस्याले नियमित औषधि खानुपर्ने अवस्था देखिएको छ । ब्लडप्रेसर..